MoU – Eleven Media Group
Posted in NewsTagged MoULeaveaComment on ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရေလုပ်ငန်းများသို့ MoU စနစ်ဖြင့် မြန်မာရေလုပ်သားများ တရားဝင်စေလွှတ်နိုင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် ဆွေးနွေး
Posted on May 27, 2018 May 28, 2018 by ကိုရွှေသိန်း
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကဘီမြို့ (Krabi) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု၏ အလုပ်ချိန်ပြင်ပတွင် လောင်းကစားလုပ်ကြရာမှ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၍ MoU လုပ်သားတစ်ဦး သေဆုံးသည့်​ဖြစ်စဉ် ​မေ ၂၆ ရက်​​ညက ဖြစ်​ပွားခဲ့​ကြောင်း သိရသည်။
ပစ်​ခတ်​မှုဖြစ်​ပွား၍ မြန်​မာအလုပ်​သမားတစ်​ဦး​ သေဆုံးကြောင်း သတင်းရလျှင်ရချင်း သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာအေဂျင်စီနှင့် မြန်မာပြည်ပ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEAF Call Centre မှ တာဝန်မှူးတို့သည် အလုပ်သမားသံအရာရှိထံ သတင်းပို့ပြီးနောက်​ ကဘီမြို့သို့ ညတွင်းချင်း သွား​ရောက်​ပြီး အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခြင်း၊ တရားခံဖမ်းမိနိုင်ရေးအတွက် ကဘီရဲဌာန၊ ကဘီမြို့ပရဟိတအသင်းမှ ဦးမှတ်ကြီး၊ ကိုမျိုးချစ်တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း​ဆောင်ရွက်ခဲ့​ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူ မောင်ကျော်လင်းသည် ကုမ္ပဏီတူ၊ လုပ်​ငန်းတူ မြန်မာအလုပ်သမားများ၊ ထိုင်းအလုပ်ကြပ် အပါအ၀င် ထိုင်းလူမျိုးလေးဦးတို့နှင့်အတူ တောက်ကွန်းပါးခေါ် ထိုင်းခြောက်ကောင်ဂျင်ပုံစံ လောင်းကစားစုပြီး ကစားခဲ့ကြကြောင်း၊ ကစားရာမှ အလျော်အစားကိစ္စနှင့် ဒိုင်ဖြစ်သူ ထိုင်းအလုပ်ကြပ်နှင့် စကားများရန်ဖြစ်ကြကြောင်း၊ မြန်မာလုပ်သားများက ၀ိုင်းဝန်းဖျန်ဖြေစဉ် ထိုင်းအလုပ်ကြပ်ဖြစ်သူ ဖိကွန်းဆိုသူက အခန်းထဲမှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သော သေနတ်ကိုယူ၍ မောင်ကျော်လင်းအား လိုက်လံရှာဖွေ၍ ပစ်ခတ်ပြီး ကားမောင်း ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သိရသည်။
ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မိုးကုတ်မြို့မှ အလုပ်လာရောက် လုပ်ကိုင်သော မောင်ကျော်လင်း MB 31125 ၏ ကျောဘတ်မှကျည်ဝင်၍ ရင်ညွန့်အထက် နှလုံးကိုဖောက်သည့်ဒဏ်ရာနှင့် ည ၉ နာရီမိနစ် ၂၀ တွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။
ပစ်​ခတ်​ထွက်ပြေးသူအား ဖမ်းမိနိုင်ရေးအတွက် ကဘီရဲစခန်းက အပူတပြင်းကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီနှင့် MOEAF အနေဖြင့် ကျန်ရှိသော လုပ်သားများ၏ လုံခြုံရေး၊ အခွင့်အရေးများ အပြည့်အ၀ရရှိရေး၊ အမှုမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး၊ အသုဘကိစ္စ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် အစစ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း MOEAF ပြန်​ကြား​ရေး​ကော်​မတီထံမှ သတင်းရရှိသည်။
Posted in NewsTagged MoU, ထိုင်း, လူသတ်မူLeaveaComment on ထိုင်း​တောင်​ပိုင်း၌ MoU မြန်​မာလုပ်​သားတစ်​ဦး လုပ်​ငန်းခွင်​ပြင်​ပတွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်​သတ်​ခံရ
မီးလောင်ကျွမ်း ပျက်စီးသွားသည့်ယာဉ်အား မေ ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်
MoU လုပ်သားများ တင်ဆောင်လာသည့် ခရီးသည်ကားသည် ဒေါနတောင်ကျော်လမ်း ကော့ကရိတ်ရဲစခန်းမှ ခုနစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင် မေ၂၁ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး မည်သည့်ပစ္စည်းမှ မယူခင်ဘဲ ကိုယ်လွတ်ထွက်ပြေးရသော်လည်း တစ်စုံတစ်ဦး အသက်ဆုံးရှုံးမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ် မြ၀တီ ကော့ကရိတ် ဒေါနတောင်ကျော်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၅၄-၁၅၅ ကီလိုမီတာကြား နတ်စင်ကွေ့တွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ ကော့ကရိတ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးမျိုးဇော်နှင့် အဖွဲ့သည် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်စု (၇၁) ရဲအုပ် သန်းနိုင်ရွှေ ဦးစီးသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးရာ မေ၂၁ ရက် နံနက် ၃ နာရီအချိန် ကော့ကရိတ်ဘက်မှ မြ၀တီဘက်သို့ ယာဉ်မောင်းသိန်းအေး မေတ္တာလင်မြိုင် မြ၀တီမြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်အမှတ် BB/5714 ဟိုက်အေ့စ်ယာဉ်သည် အခင်းဖြစ်နေရာ အရောက်တွင် ညာဦးခေါင်း၌ ၀ိုင်ယာရှော့ဖြစ်ကာ မီးစတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သွားလုပ်ရန် မြန်မာအိပ်စပတတ်စ်အေဂျင်စီဖြင့် MoU လုပ်သားအဖြစ် တရားဝင် အလုပ်သွား လုပ်ကြမည့်သူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်ပေါ်ပါလာသူ ခရီးသည် (MoU လုပ်သား) များက ၀ိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ် ကြသော်လည်း မရ၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မီးသတ်ယာဉ် တစ်စီးဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရသည်။
ယာဉ်ပေါ်ပါသူ ယာဉ်မောင်းနှင့် ခရီးသည်များမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှာ ဒဏ်ရာရရှိခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ယာဉ်တစ်စီးလုံး မီးလောင်ပျက်စီး သွားခဲ့သလို MoU လုပ်သား ခရီးသွားများ၏ ခရီးဆောင်အိတ်များမှာ ယူချိန်မရလိုက်ဘဲ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည် ဟုဆိုသည်။
ယာဉ်ပေါ်ပါခဲ့သူ တစ်ဦးက “ကားညှော်နံ့ရပြီး မီးခိုးတွေ ထွက်လာတော့ ကားဆရာက လမ်းဘေး ချရပ်လိုက်တယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းကြတယ်။သိပ်မကြာလိုက်ဘူး။ ၀ုန်းဆိုထလောင်တာပါပဲ။ အထုပ်တွေကို ခေါင်မိုးပေါ် ကြိုးချည်ထားတော့ ယူချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ အားလုံးပါသွားတယ်။ အ၀တ်အစား၊ ပိုက်ဆံကအစ ပါသွားတာပါပဲ” ဟုပြောကြားသည်။
သို့ဖြစ်၍ ပေါ့ဆစွာမောင်းနှင်၍ မီးလောင်ကျွမ်းစေသူ သိန်းအေး ၄၃ နှစ်အား ကော့ကရိတ် မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၂၂၂/ ၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၈၅ အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့အတူ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်- ဘန်ကောက် အဝေးပြေးလမ်းမ ကီလိုမီတာ ၆၀ အနီးတွင် ခရီးသည်ကားတစ်စီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် မြန်မာ MoU လုပ်သား ၂၀ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged MoU, မီးလောင်, မြ၀တီLeaveaComment on မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ဒေါနတောင်ကျော်လမ်းတွင် MoU လုပ်သားများ တင်ဆောင်လာသည့် ခရီးသည်ကား မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်း ထွက်ပြေးခဲ့၍ အသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဟုဆို
Posted in Headline, NewsTagged MoU, ရခိုင်ပြည်နယ်LeaveaComment on ပင်လယ်ထွက်ပေါက် ရှိနေသည့်နေရာတိုင်း OBOR အောက်တွင် Corridor အဖြစ် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစင်္ကြံ MoU အတွက် အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းမှု ယနေ့ဆွေးနွေးမည်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်နှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ် (Photo:mofamyanmarfacebook)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး Smt. Sushma Swaraj တို့ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) ခြောက်ခု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး Smt. Sushma Swaraj တို့သည် မေ ၁၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး Shri Mr. Bikram Misri နှင့် အိန္ဒိယ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး Smt. Sushma Swaraj တို့သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်နေစဉ်
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်နှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေနှင့် အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး Smt. Sushma Swaraj တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့၏ နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ် ဖြတ်သန်း သွားလာရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်အရ သက်တမ်းရှိ ဗီဇာ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံသား၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ နှင့် တတိယနိုင်ငံသားများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် တမူး (မြန်မာ)-မိုရေး (အိန္ဒိယ) နှင့် ရိခေါဒါရ် (မြန်မာ)- ဇိုခေါသာ (အိန္ဒိယ) နယ်စပ် ၀င်၊ ထွက်ပေါက်များမှ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဗီဇာသတ်မှတ်ရက်အတိုင်း နေထိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသနေ ပြည်သူများသည် တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ် လျှောက်ထား၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းအုံနှင့် အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး Shri Mr. Bikram Misri တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား ပုဂံ ဒေသရှိ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သော စေတီပုထိုးများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အဆိုပါဘုရားများအား မြန်မာနိုင်ငံ၊ သာသနာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Archaeological Survey of India (ASI) တို့ ပူးတွဲလျက် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မော်တော်ယာဉ် ၁၀ စီး ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် သထုံမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည့် Indo -Myanmar Industrial Training Centre တည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် မုံရွာမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည့် Indo-Myanmar Industrial Training Centre တည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ India Foreign Service Institute တို့အကြား မြန်မာသံတမန်များအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် မြင်းခြံမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Indo-Myanmar Industrial Training Centre မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ရန် ငါးနှစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတို့ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Posted in Headline, NewsTagged MoU, အိန္ဒိယနိုင်ငံLeaveaComment on နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာခြောက်ခု လက်မှတ်ရေးထိုး
Posted on May 8, 2018 May 9, 2018 by ထွန်းလင်းအောင် (မြစ်ကြီးနား)
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ထိန်ချုံးဟိန်ရုန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ မြစ်ကြီးနား စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်စီမံကိန်း နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ်
မြစ်ကြီးနား စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်စီမံကိန်းအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပေါင်စန်းပြည်နယ်ခွဲမှ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မေ ၈ ရက် နံနက်က နားလည်မှုစာချွန်လွှာ MoU ကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးဝေလင်းနှင့် ပေါက်စန်းပြည်နယ်ခွဲ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ဒူးချွမ်ချန်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်မျိုးညွန့်၊ ဟိန်ရုန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ တွမ်ကြည်ဂွေ့တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးဝေလင်းက “ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပေါက်စန်းပြည်နယ်ခွဲ အစိုးရကို ကြိုဆိုပါတယ်။ MoU လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြတဲ့ နှစ်ဖက်သောအဖွဲ့များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ် ဖက်နှစ်နိုင်ငံအတွက် နှစ်ဖက်သော ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ MoA ၊ JVA ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက်လည်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်တော့ ညှိနှိုင်းရဦးမှာပါ။ တည်ဆောက်ရေးကာလက JVA စာချုပ်ချုပ်ပြီးမှပါ။ အဲဒီမတိုင်ခင် ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်း ချပြမယ်။ လွှတ်တော်မှာလည်း ဆွေးနွေးအတည်ပြုချက်ရယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလာမယ့် လွှတ်တော်မှာ တင်ပြမှာပါ။ အကျိုးအမြတ်ရာနှုန်းကတော့ ဆက်ပြီးညှိနှိုင်းရဦးမှာပါ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
ပေါက်စန်းပြည်နယ်ခွဲ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒူချွမ်းချန်က “လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ပေါက်စန်းပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ နယ်မြေချင်းထိစပ်နေပြီး ယဉ်ကျေးမှုကအစ ကူးလူးဆက်ဆံမှုက အထူးအရေးကြီးခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တစ်ဇုန်တစ်လမ်း ဦးဆောင်မှုဗျူဟာရဲ့အောက်မှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က တည်ဆောက်ကဏ္ဍတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ထိန်ချုန်း-မြစ်ကြီးနားလမ်း တည်ဆောက်ရေး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးကဏ္ဍမှာ အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ လုပ်ဆောင်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရမယ်။ စာချုပ်ပါအချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံများကိုလည်း လိုက်နာကြရပါမယ်။ ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကတစ်ဆင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတွေလည်း မြှင့်တင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်။ ငွေကြေးဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားကူးသန်းမှု မြင့်မားရေးတွေလည်း ဒီဇုန်ကိုအခြေခံပြီးမြင့်တက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း” ဟု ဆိုသည်။
မြစ်ကြီးနား စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်စီမံကိန်းသည် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် နန်ကျင်ကျေးရွာအုပ်စု ပလနကျေးရွာအုပ်စုများတွင် တည်ရှိပြီး ၄၇၅၁ ဧကကျော်ရှိကြောင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျ တန်ဖိုးတရုတ်ယွမ်ငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၈၀၀၀ (မြန်မာကျပ် ၃၇၂ ဘီလျံ) အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၇၃ ဒသမ ၄၄ သန်းခန့် ကုန်ကျနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။
စီမံကိန်းကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ဟိန်ယုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပြည်သူ့ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ ပူးပေါင်း၍ စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကုမ္ပဏီ (Joint Venture Company) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရှယ်ယာကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အနည်းဆုံး ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ယူထားပြီး ၁၀ နှစ်ကြာတည်ဆောက်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျပ် ၃၇၂ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၂၇၃ သန်း) တန်ဖိုးရှိ မြစ်ကြီးနား စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန် စီမံကိန်းအတွက် ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းက အကြံပြုရာတွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီ၏ နောက်ခံ၊ ငွေကြေးခိုင်မာမှု၊ နိုင်ငံအပေါ် တာဝန်ကျေပွန်စေသည့် အချက်အလက်များကို သံရုံးများမှ တစ်ဆင့်တောင်းယူ မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ သီလ၀ါ စက်မှုဇုန်အပြင် မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်ကို လေ့လာရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ချဉ်းကပ်ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းငယ်များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်တို့ရှိ စက်မှုဇုန်များမှာ အတုယူစရာများရှိနေပြီး လုပ်ငန်းသဘောအရ အရှုံးအမြတ်ရှိနိုင်သဖြင့် ရှယ်ယာအများ ဆုံးယူထားသူက တာဝန်အရ အရှုံးအမြတ်ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်၊ သီလ၀ါစက်မှုဇုန် အောင်မြင်ခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးအရလည်း ပါဝင်နေကြောင်း စသည့် အကြံပြုချက်များ ပြောကြားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် လီဒိုလမ်းမကြီးက ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှ ဖြတ်သန်းထားကြောင်း လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့ တရားဝင်အဓိက ဆက်သွယ်သည့်ဝင်ပေါက်မှာ ကန်ပိုင်တည် ၀င်ပေါက်နှင့် လွယ်ဂျွယ်ဝင်ပေါက်၊ ပန်ဝါ၀င် ပေါက်တို့ကို အဓိက အသုံးပြုနေကြောင်း ထို့ပြင် လိုင်ဇာ၊ မန်ဝိန်းကြီး ၀င်ပေါက်များကိုလည်း အသုံးပြုနေကြကြောင်း သိရသည်။
Posted in Headline, NewsTagged MoULeaveaComment on မြစ်ကြီးနား စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန် စီမံကိန်းအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ MoU ရေးထိုး